USA oo Israel u Sheegtay in Darbiga Galbeed Uusan Ahayn Dhulkooda
Nin Yahuudi ah oo ku duceysanaya Darbiga Galbeed
Saraakiisha Israel ayaa lagu warramay inay ka naxeen oo ay “layaabeen” markii sarkaal Mareykan ah uu u sheegay in Derbiga Galbeed – Goobta ugu barakeysan diinta Yahuuda – uu ku yaallo Daanta Galbeed, oo aanu ka tirsaneyn “Dhulkooda”.
Hadalkan oo uu weriyey Taleefishinka Channel 2 ee Israel ayaa abuuri kara xasarad diblomaasiyeed, xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku diyaarinayo inuu booqdo Israel, dhammaadka toddobaadkan.
Sida uu ku warramayo Channel 2, kooxda ra’iisul wasaare Netanyahu ayaa sarkaal Mareykan ah weydiistay, haddii Trump uu Netanyahu kula biirayo duco loo tagayo Darbiga Galbeed.
Hase yeeshee sarkaalka Mareykanka ayaa la sheegay inuu ku jawaabay “Maya”, sababta oo ah buu yiri “Kani ma ahan dhulkiina”, isaga oo intaas ku daray in Darbiga Galbeed uu qeyb ka yahay Daanta Galbeed, waxaana hadalkaas ka dhashay inay isku qeyliyaan kooxdii Mareykanka iyo kuwii Yahuuda.
Afhayeen u hadlay Aqalka Cad ayaa VOA u sheegay “Hadalladan ma uusan ansixin Aqalka Cad. Kama tarjumaan mowqifka Mareykanka iyo mowqifka madaxweynaha”